Home News Dawladdii Daah-furnaan, la dagaallanka Musuqmaasuqa iyo Nabad iyo nolol maxaa u dambeeyey...
Dawladdii Daah-furnaan, la dagaallanka Musuqmaasuqa iyo Nabad iyo nolol maxaa u dambeeyey Somaliya waa Dalka adduunku ugu musuq maaasuqa badan 2017/18
Guud ahaa waa caado joogto ah in marwaliba dawladdaan ka been sheegto xaaladda uu dalku ku sugan yahay mar waliba. Sidoo kale waxay in muddo ahba dawladdaan Farmaajo iyo Kheyre cuskaneysay sheegahada waxayaabo ay dawadii hoore qabatay oo ay mira gurkoodii ku soo hagaagtay sida habeynta hannaanka Maaliyadda dalka balse ay si xun u maaushay, soo celinata hawada, Ka boodidda Wajeer iyo waxyaabo badan oo kale, hasa yeeshee dhamantood ay sheegatay inay iyadu qabatay, ayey haddana six un u wada maasmuhay oo iyagiiba ay hadda burbur qarka u saaran yihiin.
Dhinaca kale waxay mar waliba ku qeylin jirtay isla xisaabtan, ladagaalanka musuqmaasuqa iyo ilaalinta hantida ummadda dalkuna maanta ma jirto maalin uu ka liito dhinaca maamulxumada, amaanka, iyo Musuq Maasuqa oo uu noqday dalka adduunka ugu musuq maasuqa badan.
Ma jiro musuqmaasuq lala dagaallay bale waa la sii kordhiyey waxaana marqaati ku ah hay’adda Transparacy international oo sanad waliba soo saarta shax muujineysa sida waddaama ay musuqmaasuqa ugu kala badan yihiin ayaa markii ugu horreysay dalkeenna waxaa uu ka yahay dalkii 180 oo ah dalka adduunyada ugu musuqmaasuqa badan. Waxaa si aan sharci ahayn isu dhaafa lacago badan oo ku dhex wareega madaxda dalka. Boorsooyin lacag ah oo ay kala muulaaan kooxaha hoggaanka haya sid Fahad, Kheyre, Yariisow, Beyle, Farmajo, iwm waana waddo baaba’ah oo uu dalku ku socdo oo keeni doonta inuu dalku dumo dhaqaale ahaan. Waayo waxaa hadda la xadaa lacag kastaa oo dalka soo gashaa qeybta ugu badan, waxaana is taagi doona wareegga lacagta dalka ooh al mar ayuu dhaqaalaha dhulka ku dhici doonaa, waana marka dadku ay iscuni doonaan haddaan hadda wax laga qaban.
Markii ay dalka la wareegayeen waxaa uu looxan hoose kaga jiray 176 haddana waxaan kaga jirnaa 180.
Previous articleMeydad iyo dhaawacyo tuban Maqaaxi ku taal MUQDISHO oo uu Qarax ka dhacay (Live Video)
Next articleW/A/Dibadda oo been ku Tilmaantay Eedeyntii Wasiir-ku-xigenkeeda ay Saxaafadda u marsiiyeen X/Ilaaliyaha iyo Hantidhowrka kadib markii ay ku fashilmeen inay soo xeraan.
Madaxweyne Farmaajo iyo Guddoomiye Jawaari oo yeeshan kulan aad u adag...